मास्टर जीवरत्नका उत्कृष्ट चित्रहरू
चित्रकला मास्टर जीवरत्नका उत्कृष्ट चित्रहरू
मास्टर जीवरत्न शाक्य पेन्सिल र पानीरङबाट सुन्दर–सुन्दर चित्र बनाउनुहुन्थ्यो । उहाँले रेखा एवम् पानीरङबाट बनाउनुभएका बोधिसत्यको, बज्रयोगिनी, करुणामय मन्दिर (काभ्रे), चाबेलको चैत्य, स्वयम्भूस्थित मञ्जुश्री चैत्य, हेराशोभाको पोट्रेट र बुद्धको जीवनीगत् चित्रहरू सुन्दर छन् । दर्शनीय छन् ।
मास्टर शाक्यले बनाउनुभएको रानीपोखरी र दरबार स्क्वायरका चित्रहरू पनि आफैमा उत्कृष्ट चित्रकला हुन् । पेन एन्ड इंक र पानीरङबाट बनाउनुभएको पाटन दरबार र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको चित्रहरूको आजसम्म पनि प्रशंसा भइरहेको छ ।
उहाँका यी दुई चित्र अवलोकन गर्र्नेेले हातले बनाएका हुँदै होइनन् भनेर ढिपी गर्छन् । हुन पनि हो, पाटनको दरबार स्क्वायर र भक्तपुरको दरबार स्क्वायरलाई हे¥यौँ भने ठ्याक्कै फोटो खिचेर राखेका होलान् जस्तो लाग्दछ । तर, यी चित्रहरू फोटो होइनन् । अर्थात खिचेका तस्बिर हैनन् । यी चित्रहरू त मास्टर जीवरत्न शाक्यले बनाउनुभएको हो ।
परफेक्ट एनाटोमी, दुरान्तरता, प्रकाश र छायाको मेलमा यी दुवै चित्र बनाइएका छन् । अपराह्न दुई, तीन बजेको जाडोको पारीलो न्यानो घाममा बसेर बनाइएका दुवै चित्र जीवन्त छन् ।
वास्तवमा चित्र बोल्नुपर्दछ । बोल्ने चित्र बनाउन सक्नु पो कलाकार । जीवरत्न शाक्यका दुवै चित्रहरू बोल्छन् । अर्थात हेर्नेबित्तिकै कलापारखीहरूको मन छुन्छन्, उहाँका चित्रहरूले । त्यसैले उनी हाम्रा आदरणीय कलाकार हुन् ।
काठमाडौं लगनवहालको पुरानो घरमा वि.सं. १९७८ साल माघ कृष्ण चौथीका दिन उहाँको जन्म भएको थियो । उहाँलाई ‘जुजुरत्न’ भनेर पनि चिनिन्छ । उहाँले मास्टर चतुरत्नसँग ‘नेपाल आर्ट स्कुल’ र त्यसपछि जुद्धकला पाठशालामा चित्रकला पढ्नुभयो । र, पछि गएर त्यहीँ नै पढाउन थाल्नुभएको थियो ।
जीवरत्न शाक्यले वि.सं. १९९३ र २०१३ सालमा गरी जम्मा तीनपटक एकल चित्रकला प्रदर्शनी आयोजना गर्नुभयो । तत्पश्चात् राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा निरन्तर भाग लिनुभयो ।
मास्टर कलाकार जीवरत्न शाक्य पोट्रेट बनाउन उस्ताद नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तत्कालीन राजा महेन्द्र, रानी रत्न, वीरेन्द्र, ऐश्वर्य, सुरेन्द्रशमशेर, मृगेन्द्रशमशेर, पद्मशमशेर, नरोत्तसदास श्रेष्ठ, राजमान शाक्य, श्रीभक्त, ज्ञानीशोभा शाक्यलगायत अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूका पोटे«ट, मुहार चित्र बनाउनुभएको छ । रेखा र रङ अनि भावका दृष्टिबाट उहाँका चित्रहरू उत्कृष्ट रहेका छन् ।
उहाँको शिलादक्षता पौभाचित्र, मूर्तिकला र भित्तेचित्रमा पनि देखिन्छ । सुरेन्द्रशमशेरको निवासमा उहाँले बनाउनुभएको भित्तेचित्र अवलोकन गर्र्नेले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गर्दछन् ।
जापानमा पनि उहाँ त्यत्तिकै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । जापानमा उहाँको वि.सं. २०५० देखि २०६० सालसम्ममा १५ पटक बुद्ध जीवनीमा आधारित चित्रहरूको प्रदर्शनी भएको छ ।
कला शिक्षक, चित्रकार, मूर्तिकार, दृष्टान्त चित्रकार र पौभा कलाकारका रूपमा चिनिनुहुने मास्टर जीवरत्न शाक्यलाई ललितकला समीक्षक समाजले २०५७ सालमा पहिलोपटक अभिनन्दन गरेको थियो । तत्पश्चात् अरू संस्थाले पनि बेलाबेलामा अभिनन्दन गरेका छन् ।
उहाँ ९१ वर्षको उमेरमा २०६९ साल असोज १ गते काठमाडौं, शोभाभगवतीमा बित्नुभयो । उहाँको निधन हुँदा थोरै कलाकारहरूले मात्र थाहा पाए । अतः उहाँको अन्त्येष्टिमा थोरै कलाकारहरू मात्र उपस्थित भएका थिए । यद्यपि, उहाँको चित्रकला आज पनि जीवन्त छ । उहाँको कृति र नाम आज पनि अमर छ ।